Ingabe abantu abaningi abakuzungezile ngempela (imizimba engenampilo)? : UMartin Vrijland
Kulula ukucabanga, kodwa ingabe uke wazibuza ukuthi ngabe abanye abantu abakuzungezile babe 'nomphefumulo' ngempela? Kumele uqale ubheke empilweni yakho yansuku zonke futhi ngezinye izikhathi uzothola abantu abanamandla kakhulu okwenza ngokuzwelana, kodwa ngubani ongakwazi ukuhamba ngokungenangqondo ngaphezu kwabanye noma ukwenza ibhizinisi ngokumomotheka ebusweni babo ukuthi wonke ukuphazamisa 'ubuntu'.
UGeorge Ivanovich Gurdjieff wayengumfilosofi wamaGreki-Armenia, owayengumlobi, umlobi, umqambi, umculi we-choreographer nomthengisi. Uma usheshe ube nokuphikisana nalokhu ngoba ungase ubenqabe-isiGreki noma u-anti-Armenian, faka lokho okufakelwe ngaphambili kwamasiko eceleni futhi ufunde. lesi sitatimende kusuka kumuntu:Iphesenti eliqakathekile labantu esihlangana nabo emgwaqweni ngabantu abangenalutho ngaphakathi, okungukuthi, empeleni bafile kakade. Kuyinhlanhla kithi ukuthi asiyiboni futhi asiyazi. Uma sazi ukuthi bangaki abantu abafile ngempela nokuthi bangaki kulaba bantu ababhekene nokuphila kwethu, kumelwe sithukuthele."
Kungenzeka yini ukuthi kufanele sithathe lokhu ngokwezwi ngokweqile kunalokho esikucabangayo? Singase sazi kakade amafilimu nochungechunge lapho sibona khona ama-robots abonakala efana nokuphila esikhathini esizayo esiseduze ukuthi awusaboni umehluko. Ama-Robot angakwazi ngisho ukubona futhi aphendule imizwelo yabantu. Uchungechunge lwe-Netflix 'Abantu Abangempela' kwakuyisibonelo esihle salokhu. Ukuze uthole umbono, buka ividiyo ye-YouTube ngezansi (futhi funda ngezansi).
Manje lolu chungechunge luyisibonelo somhlobo webhobhothi esingayilindela emphakathini ngesikhathi esifushane. Ngokuhamba kwesikhathi, kufanele sicabange ngalokho ifilimu Ukudlulisa wabonisa ukuthi yonke i-biology ingabuyekezwa nge-nanotechnology. Ososayensi base-Israel sebevele bakha iphrinta yomzimba kulo nyaka ongaphrinta amangqamuzana aqondene nomzimba esekelwe ulwazi lwe-stem cell, ngokwesibonelo, inhliziyo (bona ividiyo ngezansi). Kodwa-ke, isayensi nayo kulindeleke ukuthi ifinyelele ngesikhathi lapho ama-biocells emzimbeni angathathelwa khona yi-nano-tech eyenzelwe amaseli angalungisa noma yikuphi iphutha. Uthola ukuthi lokho kucabangeka okungenakwenzeka? Bese ucabanga ngalokho okwenzekayo uma unesilonda nokuthi umzimba womuntu usuvele unayo kanjani impahla yokuziphilisa. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
Umthetho wokunikezwa komzimba eNetherlands uye waqinisekisa kakade ukuthi izitho zikhona ngempela (ngokomthetho) ziba impahla yombuso. Ubuchwepheshe be-printer yakwa-Israyeli bubonisa ukuthi lo mthetho empeleni wawungenasici; ngoba ezweni elifana neNetherlands elinomhlangano weluleki obizwa ngokuthi 'umkhandlu wezempilo' ungacabanga ukuthi abantu babengazi ngempela ukuthi lobu buchwepheshe buyeza futhi ukuthi kungaba ngcono kakhulu ukunyathelisa izitho esikhathini esizayo esiseduze. Lezi zitho eziphrintiwe ngeke zilahlwe ngumzimba, ngakho-ke akukho mishanguzo okumelwe igonywe ukuvimbela impendulo yomzimba wakho. Phela, zinyatheliswa izitho ezisekelwe ku-DNA yazo.
Kunoma ikuphi, kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi umzimba uvame ukuphikisa isilwane sangaphandle. Kuyathakazelisa ukubona abantu ukuthi, ngokwesibonelo, bathola inhliziyo enikelwe, ngezinye izikhathi bathatha izici zomnikeli, kodwa lokho kuhlangene.
Umthetho wokunikezelwa komzimba uqinisekisile ukuthi uhulumeni unabo izitho zakho nokuthi konke okusemthethweni, isimo (ngokomthetho) singenza isondlo esingacelanga. Uyakwenza lokho ngezakhiwo zakhe, ngesakhiwo sakhe sangasese nangesikhathi esizayo mhlawumbe futhi ngalezo zimpahla ezintsha: izitho zakho. Lokhu kungenziwa ku-inthanethi nge-5G inethiwekhi kanye ne-cloud-edit indlela ebizwa ngokuthi i-CRISPR-CAS12 (bona isethulo se-TED ngezansi bese ufunde ngezansi).
Uma uqaphele okubalulekile lokhu okungenhla, ungathola ukuthi umzimba womuntu (nayo yonke i-biology) isibe yindlela yokuphila ephindaphindiwe esikhathini esizayo, ingxenye ngayinye yayo iyoba yinto engaguquguqukayo futhi iguquguquke.
Lesi singeniso sasidingeka ukuze sikuqonde kangcono indlela abaphathi bezinkampani ezinkulu ze-tech bacabanga ngayo nokuthi benzani. Isibonelo, isikhulu sezobuchwepheshe se-Google, umsunguli wefilosofi uRay Kurzweil uthi ku-2045 ngeke sibe nokufa futhi sikwazi ukuhlala ezweni elifanisayo elifana nokuphila kangangokuthi asiqapheli ukuthi kuyisimo sokufanisa. Uthi futhi singaba nama-avatars we-nano-tech nama-avatars edijithali futhi sizilayishe thina kulawo ma-avatars.
Kuyini "ukuqonda" noma "umphefumulo"?
Umbuzo omkhulu uwukuthi: Ubani noma yini elayishwa yona kulabo abathokozi? Ngokusho kwe-transhumanist efana noRay Kurzweil, ukuqonda yiziphi izinhlobo ngenxa yomzimba we-neurons ebuchosheni. Uma ubuzokwakha i-robot ene-nucle-tech receptors (neurons) eningi enombolweni njengaleyo ebuchosheni bomuntu, ukuqaphela kuyokwakhiwa. Ngenxa yokuthi ubuchwepheshe abukakulungeli ukuphinda ubuyekeze ubuchopho bomuntu, izinkampani ezifana ne-Google sezivele zisebenza kwisisombululo sefu. Ungasho ukuthi i-intanethi iyithuluzi elikhulu lokuxhuma amakhompyutha amaningi komunye nomunye ngendlela yokuthi bangakha ubuchopho obubonakalayo. Ubuchwepheshe be-Blockchain kungaba yithuluzi eliwusizo kulokhu. Ngaphezu kwalokho, uma unamakhompiyutha we-quantum kwinethiwekhi, izokwazi ukuhamba kahle kakhulu. Izinkampani ezinkulu ze-tech zixakekile ukwakha amanethiwekhi we-neural futhi igama ngokwayo liwubufakazi bokuthi umgomo wokuphela uwuphi.
Kodwa ngifuna ukuthatha isinyathelo emuva futhi ngihlale nale ndaba 'yokuqwashisa'. Ingabe umqondo wokuthi abantu bayazi ukuthi bane-neo-cortex (ngakho-ke ama-neurons amaningi, njengoRay Kurzweil aphikisa) ngokungafani nezinye izilwane ezincelisayo? Noma ingabe kukhona ulwazi olunemvelaphi ehluke ngokuphelele?
Ukuze sicabangele, ake sithi ulayishe "ukuqwashisa" kwakho nge-2045 ezweni ledijithali; ukumbumbuluza okugijima esiteshini sefu se-Google sokwenzeka kwangempela, isibonelo. Futhi ake ucabange ukuthi kulula ukuthi inkampani ka-Elon Musk neNeuralink izokwazi ukufaka ingqondo yethu ku-intanethi. Khona-ke ungakwazi ukuvuselela zonke izinhlobo zobuciko 'emzimbeni wethu wangempela' njengokuthinta, iphunga, ukuzwa, ukubona nokuzwa (ukuthinta, amandla adonsela phansi, njll). Uma i-Google ikwakha umhlaba omusha, singakwazi ukuhamba emhlabeni onje njengoJake Sully okwenziwe ezweni le-Avatar elihlaza okwesibhakabhaka kule movie ye-2009.
I-trailer ye-Surrogates yama-movie ngezansi mhlawumbe yisibonelo esicacile sokuchaza ukuthi ngifuna kuphi ukucabanga kwami. Bheka futhi ubone ukuthi kukhona njalo umugqa phakathi komuntu 'wokuqala' kanye 'nesimo sengqondo'. Kodwa-ke, lelo phephandaba i-Surrogates lisekelwe 'kumarobhothi afana nokuphila' noma 'ama-avatars' njengoba sibona nakuchungechunge olunjengokuthi 'Real Humans' ku-Netflix. Kodwa-ke, uma senza ukulinganisa okufana nokuphila okuhamba phambili esiteji samafu, lapho ngisho ne-avatar kuyi-digital, khona-ke ukumbumbuluzwa 'kungaphandle kwezwe elibonakalayo'. Ngakho-ke, ungabe ulala embhedeni wakho nge-interface ye-brain-cloud nomlingani wakho olele embhedeni eduze kwakho angeke acabange nhlobo ukuthi ukulinganisa okunengqondo ukhona ngaleso sikhathi. Mhlawumbe umzimba wakho uyamangalisa ngoba ubuchopho bakho bukhona empini enyantisayo namadoda aluhlaza okwesibhakabhaka. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo).
Uma, ngokusho koososayensi njenge-Ray Rayzweil ne-Google nezinye eziningi ze-transhumanists, kuba lula ukuhlala kulesimo sangempela sempilo esikhathini esizayo esiseduze, asikwazi yini ukuzibuza ukuthi ngabe asikho yini ukuhlala ngendlela efanayo? Akubona yini bonke abakuhlobo lwekhishi futhi badlala emhlabeni we-avatar? Uma sibambelela kulowo mqondo okwesikhashana, bese sibuyela emqondweni "wokuqonda." Cabanga ukuthi ukuxhumana kobuchopho bukaNeuralink obuzayo kusuka ku-Elon Musk buyi-wireless futhi bugijima kwinethiwekhi ye-5G. Ube noxhumano olungenantambo nge-brain yakho ne-avatar yakho ekufaniseni kwi-platform ye-Google yamafu. Ngakho umuntu olawula i-avatar kuleso simingqondo ubuchopho bakho bokuqala obusemzimbeni wakho obonakalayo kuleli zwe lamanje; lowo obona uma ubuka esibukweni. I-avatar ekufaniseni ilawulwa ubuchopho bakho bokuqala. I-avatar 'iphefumulelwe' futhi ingacatshangelwa ngaphakathi kwalowo okufaniswayo njengomuntu ophefumulelwe 'onokuqonda'. Lokho kuphefumulelwa ngumugqa ongenawo ucingo ngobuchopho bakho bokuqala.
Uma usukwazi ukulandela okungenhla kuze kube manje, ngiyakucela ukuba uqaphele ngokucophelela lokhu okucatshangwayo kokuzivocavoca. Manje ungacabanga ukuthi kufana kanjani nokuphila okufaniswayo nokuthi indlela leyo yokulinganisa ngayo kulawulwa yiwe futhi ukuthi singabheka ukuxhumeka kobuchopho obungenazintambo nge-5G inethiwekhi ngokulinganisa njengoba ukuphefumulelwa kwe-avatar kuleso simulation.
Khona-ke siza embuzweni ukuthi ungacabanga ukuthi umzimba wakho wamanje obuchopho kungenzeka usuvele ube yi-avatar ekufaniseni. Uma sibheka ukuhlolwa kwe-slits kabili yi-physicist Niels Bohr, kubonisa ukuthi indaba ikhona kuphela uma kukhona umbukeli. Ngama-athikili amaningi ngichazile ukuthi sesivele "siphila ekufaniseni". Uqala isiqalo uma wena lesi sihloko funda ngokucophelela, bheka ngaphansi kwento ethi "ukulinganisa" imenyu noma faka igama elithi 'ukulinganisa' enkundleni yokusesha. Ngishiya leso singeniso ngemuva lapha futhi nginciphisa ukucabanga kokucabanga ukuthi sesivele "siphila ekufaniseni". Ngizifaka ngamabomu ngamamaki wokucaphuna, ngoba awukwazi ukuhlala ngokulinganisa, kepha ungaba nokuqiniseka okuphelele okuhlala kuyo, kodwa empeleni uyabona futhi adlale ngokusuka (okuvela ngaphandle).
Uma sidlala ukulinganisa, kufanele kube khona 'uxhumano lomphefumulo' nomlingisi wangempela endaweni ethile, njengokuthi kufanele kube uxhumano lwe-5G olungenantambo lwe-Neuralink ne-Google cloud platform simulation uma uzohlanganyela ekuboniseni okubonakala kubonakala ku-2045 . Lokho 'uxhumano lomphefumulo' yingakho uxhumano lwenethiwekhi 'nomuntu wokuqala' umuntu ohlezi esihlalweni. Lokho akudingeki kube ipulagi ebuchosheni, njenge-movie ethi 'The Matrix', kodwa ingaba uxhumano olungenantambo. I-avatar ekulinganisweni ngakho-ke i-animated futhi ilawulwa ngaphandle. I-avatar kulokhu okufaniswayo nayo ingalawulwa ngaphandle. Mhlawumbe manje unomqondo ongcono womqondo wokuthi 'umphefumulo' noma 'ukuqonda'.
In lesi sihloko Ngichaza ukuthi mhlawumbe sishumayela isimiso segciwane lesandulela ngculazi. Kulo ngichaza ukuthi lokhu kulingiswa kusho ukuhlola isiqalo sethu ('ifomu lethu lokuqala'). Umakhi we-simulation wamanje ubonakala ebonakala njengoLucifer. Lokhu kungase kubonakale ngokusekelwe kulokho okushiwo yilo "izwe likaSim", kodwa konke kubonisa ukuthi ukufaniswa kufanele kuqondiswe ngendlela ethile. Uma njengomakhi wokufanisa kufanele uhloniphe 'umthetho wenkululeko yokuzikhethela', kunendlela kuphela ye-1 yokuqinisekisa umphumela womdlalo.
Ngaphandle kwentando yokuzikhethela, uhlelo alulona ukulinganisa, kodwa empeleni luhlobo lwefilimu, umphumela osuvele uqinisekile. Kodwa-ke, okuyisisekelo sokulinganisa, ukuthi uhlinzeka abadlali inselelo futhi bafuna ukuhlola ukuthi badlala kanjani umdlalo. Isibonelo, awusakheli simulator yendiza ukwenza indiza ibheke futhi ikwazi ukuhamba nge-autopilot, uyayakha ukuze uhlole umshayeli. Esikhathini sokumlingiswa kwamadlali amaningi ufuna ukutadisha ukuthi abadlali baziphathe kanjani ngabanye futhi bebonke futhi babone ukuthi yiziphi izinqumo abazozenza ngabanye futhi ngokubambisana.
Indlela kuphela yokuqinisekisa umphumela wokufanisa, ngaphandle kokuphazamisa umthetho wenkululeko yokuzikhethela, ukubeka ama-NPC amaningi (ama-Non Playing Characters) ngangokunokwenzeka emdlalweni olawulwa ngumakhi womdlalo. Ungakwazi, isibonelo, ukubeka lawa ma-NPC ezikhundleni ezivelele ekulandiseni bese ulandela iskripthi; iskripthi esenza kube nzima ukuthi abanye abadlali bathathe isiqondiso esihlukile. Okuningi mayelana neskripthi esingazibona kulokhu okufaniswayo kungatholakala lesi sihloko.
Ake sithi kukhona umakhi we-1 we-simulation yethu yamanje noma nje ukuze kube lula ukuthi kukhona ithimba labakhi kulowo "ungqimba wangempela", khona-ke ungakwazi kuphela ukulawula inani elinganiselwe lama-NPC ngaphakathi kokufaniswa; Ama-NPC alandela iskripthi ekufaniseni futhi azama ukuxhumanisa abanye abadlali ngendlela ethile (eqhutshwa ithimba labakhi). Kodwa-ke, kukhona enye indlela yokuthinta iskripthi kanye nomphumela, kodwa-ke kufanele siqale ukubheka ukuthi bonke abadlali bangubani futhi ngakho-ke sibuze ukuthi bonke labo 'abaxhumano bomphefumulo ongenawo moya nabadlali bokuqala' bavelaphi; ngamanye amazwi: bangaki abadlali abadlala lo mboniso?
Yonke imiphefumulo ivelaphi?
Isibalo sabantu abasemhlabeni sisondela ku-8 billion. Uma siqala kumodeli wokufanisa, abadlali be-8 bhiliyoni 'eseceleni sokuqala' nabo badinga ukudlala lo mdlalo. Eqinisweni, umfundi obucayi ngempela kufanele angibuze lo mbuzo: Zonke lezo miphefumulo zivelaphi? Manje sisazi ukuthi umqondo wokuthi "umphefumulo" noma "ukuqonda" empeleni umele uxhumano nocingo lwangempela; ifomu lethu langempela ngaphandle kwalesi simulation. Kuma, njengokungathi, ukuxhuma okungenantambo nge-self yethu yokuqala (njengoba kuchaziwe ngenhla). Ngakho kufanele kube nabadlali abangaba yizigidi eziyi-8 kubunqamu bokuqala.
Ngikholelwa ukuthi ayikho imiphefumulo eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-8 nokuthi ayikho imishini yokuhlukanisa umphefumulo, njengoba abantu bathanda isimangalo se-Wes Penre (bheka lapha). Ngombono wami, lezo ziyizindaba ezingenasisekelo. Kungcono kakhulu ukubuka isimo samanje sobuchwepheshe. Kuyo sibona ukuthi ama-robot aqala ngokuzimela futhi ukuthi inhloso yukuthi ukuhlakanipha okusebenzayo kungalingisa ukuhlakanipha kwabantu nokuzizwa. Ngakho-ke uma umakhi (noma ithimba labakhi) lalokulingisa likwazi ukwakha ama-avatars okuziphindaphinda (umzimba wethu womuntu), ngakho-ke kungenzeka ukuthi ucabange ukuthi izidumbu eziningi / izithako esizibhekayo ezizungezile ukuziphendulela, kodwa akukho ukulawula kwangaphandle okwenzekayo. Ngokwezinye izikhathi, ziyi-avatars ezihlakaniphile ezihlakaniphile ezingenayo yangaphandle 'Jake Sully' futhi ngakho-ke aziphikisiwe. Ukuze kube lula, ake sikubize lezi NPC ezibuhlungu. Ama-NPC angenangqondo ayinakunqunywa futhi angaba nesithakazelo kakhulu futhi anesihawu. Lokhu kungenxa yokuthi sibhekene ne-AI ethuthukile (ku-bio-brain). Abakhi balesi simulation baye basebenzisa "kahle" bots advanced.
Ube ne-NPCs elawulwa yiqembu labakhi balesi simulation kanye nama-NPC angenangqondo aphethe ubuchopho 'obuhlakani' futhi ahlelwe kabusha ukuze alandele iskripthi. Iqembu lokuqala lama-NPC lilawulwa yi-"uxhumano lwe-wireless archontic" nomakhi (/ iqembu labakhi) futhi lilawula iskripthi. Iqembu lesibili lilandela iskripthi ngaphandle kwezinkinga.
Iyini umsebenzi we-Nlls (zombie) we-soulless?
Okokuqala sibheka umphumela. Uma udlala ukulinganisa futhi uhambele ama-NPC angenangqondo alandela iskripthi, khona-ke kuzodingeka ubhekane nomqondo wokuthi 'ukucindezela kontanga'. Lokhu ukulingiswa nakho kufana nokuphila ukuthi waqala ukubona ngakho.
umqondo wokuthi 'uyazizwa'
Ngokusobala, umqondo wokuthi 'ungahlanzi kahle' kulo mongo akulutho ngaphandle kokuthi akukho ongaphandle 'Jake Sully' ezinkinobho zomuntu onjalo.
Ingabe uke uxoxe nabantu abangakwazi ngempela ukuthi igama elithi "umphefumulo" noma "ukuqonda", ngaphandle kokuthi baye bathatha leli gama kusuka enkolweni noma ekuthambekeni okungokomoya? Kusukela ngesikhathi sokuzalwa kwami ​​ngiyazi ngokuqondile "umzila ngaphandle". Angizibheki njengomuntu engiyibona lapho ngibheka esibukweni. Ngakho-ke ngiyazazi 'uJake Sully' eqhuba i-avatar yami kulokhu okufaniswayo. Kuye kwaba njalo ngaleyo ndlela. Abantu abano-NPC abathandekayo (kodwa abangakwazi ukuhlakanipha nokuzwelana) abaphikisiwe (abanakho uJake Sully engqimba yangaphandle ngaphandle kwalokhu okufaniswayo) ngakho-ke abakwazi ukucabanga lokhu nhlobo. Ukukhuluma ngokuthi 'umphefumulo' noma 'ukuqonda' kuyoba yinhlobo 'yokuhlanganyela esimweni' noma inkulumo efana neRobot Sophia; ngokusekelwe 'kokuthatha amagama'.
Umsebenzi we-NPC elula kakhulu ukukhohlisa ama-avatars aphikisiwe (noma kunalokho: abadlali bokuqala abamba iqhaza kule mbonisi ye-multi-player ngokusebenzisa avatar yabo) ukulandela iskripthi. Kumelwe banikeze labo bavotayo abaphefumulelwe ukuthi banomqondo wokuthi bancane futhi ukuthi ukumelana akusebenzi. Kumele babonise ukuthi kumnandi kangakanani lapho ubamba iqhaza noma ukuthi kuhamba kahle kanjani uma uhlushwa. Yingakho sibonile ukuthi umhlaba womhlaba ukhula ngokweminyaka emashumini eminyaka edlule. Kuyindlela eqondile yomakhi walesi simulation.
Iphuzu lokubamba iqhaza lifinyelelwe endaweni ethile lapho inani le-NPC likhulile kakhulu, enikeza abadlali abaphefumulelwe ngokwengeziwe ukuthi banomuzwa wokuphela kokuphela. Sitshele ngisho nokukhohlwa ukuthi ngumdlalo nje; ukuthi sigcina ukulingiswa.
Ngakho-ke kubalulekile ukuphinde sibone ukuthi singubani futhi sithembele ngaphandle kokuphathwa. Wonke lawo ma-NPC kulokhu okufaniswayo asenza sikholelwe ukuthi siyalahlekelwa nokuthi singabambalwa. Yilokho ukukhohliswa kokufaniswa. Kubukeka sengathi kunezinkulungwane zezigidi ekulandiseni; ngaphesheya ukuthi mhlawumbe kukhona okuncane okuzama ukuqhuba ukulinganisa. Ubuchopho bethu bomzimba bomzimba bunomatasa kakhulu kulokhu okufaniswayo. Lokho kungu-avatar wethu ubuchopho kanye nomzwelo wayo. Sibhekene nokuphazanyiswa kwenkulumo yaseBabiloni ngaphakathi kwalesi simiso futhi kufanele sithule futhi silalele ukuthi singubani. Khumbula uJake Sully wakho.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: patreon.com
Cha, asihlali ohlelweni lwe-'traterrestrial 'lwekhompiyutha: ususe lokho okungaboni kahle
I-hypothesis ekhonjiswe ngokulandelana
Amathegi: avatar, ukuqwashisa, Abalingiswa, afakiwe, game, abantu, Jake, multi, hhayi, I-NPC, isidlali, Playing, real, ukulingisa, Sully, umphefumulo
8 July 2019 ku-14: 56
Uma manje ucabanga ukuthi "Oh shit mhlawumbe nginguNPC!"
Okokuqala, kungenzeka ukuthi awukho kulewebhusayithi, kodwa kungenzeka nokuthi iminyaka yokuhlela ubuchopho bakho be-brain yakho ikukhohlwe ukuthi ukhohlwe ukuthi ungubani.
hans coudyser wabhala:
8 July 2019 ku-18: 31
Namanje usho ngokucophelela ukuthi mhlawumbe abakhiqizi abaningana balesi simulation bahilelekile ... Futhi kungani bekwenza?
8 July 2019 ku-18: 53
Angibiki lutho ngokucophelela uHans.
Ngichaza kuphela amathuba futhi ngikubiza ngokuthi ithimba lomakhi; njengoba uRay Kurzweil engase abe umakhi wesimiso esilandelayo futhi athumele iqembu labahleli ukuhlela ngaphambili ikhodi yokulingisa.
Funda ngokukhethekile izihloko ngaphansi kwezixhumanisi.
8 July 2019 ku-19: 08
Ngisaziqonda kakade ukumbumbuluzwa njengengane encane kakhulu, kodwa ukuhlelwa njalo nokuphindaphinda kwezinto kuthintekile ngegciwane lokuhambisana!
Ngisemncane ngangizizwa sengathi kufanele ngiphume lapha futhi ngizibuze ukuthi kungaba njani ukufa ukuze uzizwe okwakunjalo ngaleso sikhathi. Ngangingafuni ukufa ngenxa yokungafuni ukuphila kodwa ngenxa yelukuluku!
Kamuva empilweni abazali bakho bayabuza! "Ufuna ukuba yini empilweni yakho?" Ngathi, "Angiyikuba khona futhi ngeke ngifunde ngoba lezi yizinto ezingithandi" Khona-ke abazali bami bathi: kodwa kumelwe ube yinto engelusizo lwalutho!
Ngathi ke nginguye engifuna ukuba khona futhi ngizohamba.
Futhi emva kwalokho ngabe ngabe ngilalele kangcono imizwa yami ngoba manje ngibanjwe kakhulu kuwebhu ye-bullshit!
Ngakho-ke siyabonga ngalesi sihloko! Ngizizwele uxhumano futhi ngento yangempela!
8 July 2019 ku-21: 22
Futhi ucabangani ngombono wokuthi umuntu ongafihliwe angaphefumulelwa abantu abaphefumulelwe ngesikhathi sokuphila kwabo? Ngakho tshela ugqozi.
8 July 2019 ku-22: 00
Khona-ke awukuqondi kahle. Funda futhi ngokugcwele.
Ungakwazi yini ukuthatha enye i-avatar uma udlala umdlalo wokudlala?
9 July 2019 ku-18: 16
Kodwa uma enye i-avatar inebuchopho ungakwazi ukugijima kuyo.
Noma ngabe lokho ngeke kwenzeke ngoba usebenzisa ngamabomu i-ajenda yemidlalo?
9 July 2019 ku-18: 55
Njalo i-avatar inebuchopho futhi ungenza okuningi ngesizathu kodwa ungalokothi ubangele uxhumano lomphefumulo.
Ama-NPC kugeyimu ye-Playstation ngeke athole umuntu ngokuzenzekelayo ezinkinobho.
9 July 2019 ku-03: 07
Ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthengisa umphefumulo wakho ezintweni ezingapheli. Kusho ukuthi uzincipha kuya kweyishumi nanye (imvamisa ephansi kakhulu) futhi ulahlekelwe uxhumano lomphefumulo wakho. Wena uthengisa umphefumulo wakho ukuziphakamisa ngokwezindleko zabanye ngokuhlukunyezwa, ukubulala nokusabalalisa amanga ukuze ulondoloze amandla akho.
Ngaphandle kwakho uvela ekhaya, kunzima ukubuya.
Lokhu akusho ukuthi ngingcwele mina, kodwa ukuthi ngimthwalo wemisebenzi yami. Futhi angizange ngihlanganyele emasikweni angokwenkolo amnyama. Uma uyazi ukuthi uqobo lwakho, ufuna ukugcina lolu xhumo futhi ungabuyekezwa ezingeni eliphansi. Ngoba manje siyaqaphela ukuthi senze lokhu ngaphambili futhi sivame ukuzwa kude nekhaya kule planethi.
Okubhalile kulesi sihloko yilokho okushiwo ngakho, ngoba kungokwakho nangempendulo yethu kuso.
9 July 2019 ku-12: 55
Isihloko esihle, indaba enzima. Mhlawumbe hhayi kubantu abavamile, isofthiwe yabo ayenzelwe lokho.
Umbuzo uhlala ngokuqondene nobani owenze le meya, inkolelo, nokuthi uyini kulo. Mhlawumbe umakhi omkhulu unguLucifer, 'oletha ukukhanya', futhi njengabasebenzi abafana abasuka kwiskripthi abanikezwa nguye? ??
Yini uLucifer anqoba ngayo nalesi sakhiwo? Ingabe uyazijabulisa ngokwethu, indawo enkulu yemidlalo yakhe? Ingabe Lucifer mhlawumbe uNkulunkulu ???
9 July 2019 ku-14: 55
Funda isihloko esixhunyiwe mayelana nesitembu se-stem lapha:
Lucifer ungumakhi wesistimu yegciwane (ukulinganisa) esikudlalayo. Kulesi sihloko ngichaza ukuthi kubonakala sengathi inhloso ukuthelela insimu ye-quantum ("i-stem cell").
Yingakho unkulunkulu wazo zonke izinkolo u-Lucifer ngasese futhi manje ukhonjulwa ngokuvulekile (uma usesha ku-YouTube) yiSonto LamaKatolika:
9 July 2019 ku-15: 19
Ngaphakathi (amehlo ami) futhi ukuqhuba nokuvuna ((ukubuyisela kabusha) amandla okugcina le matrix yokulawula. Bheka imiyalo ehlukahlukene eBhayibhelini, ukuhlukanisa amakhoba kanye nama-corn / izimbuzi nezimbuzi, njll.
Uhlwanyela lokho oyokuvuna, impendulo ye-quantum mechanical evela ku-ether.
9 July 2019 ku-15: 25
Kumele kuqashelwe ukuthi inkolo kanye ne-dualsime (imodeli kaNkulunkulu / uSathane kanye nazo zonke ezinye izinhlobo zobungqingili, njengebuKristu nobuKristu, okushiya kuya kwesokudla, i-yang ne-yang, njll.) Yingxenye yeskripthi sikaLuciferi ukuze kuvezwe umqondo oqondisa isiqondiso se-DC umgomo wokuphela.
Umgomo oyinhloko wukudlala imiphefumulo (ngakho-ke ekugcineni uqobo - uhlobo lwamafomu olunezici zezingcingo / izimpawu zokudala) ukukhonza uhlelo lwegciwane ukuze kutholakale futhi kuthathe insimu ye-stem / ye-quantum.
Yingakho kubalulekile ukwenqaba / ukulahla kokubili inkolo kanye nomzila ongenawo umuntu owenza ubunye (okunye okufana nesithembiso 'sokuphila okuphakade' ezinkolweni) nokukhumbuza ukuthi wena idlala (igciwane) lokulinganisa.
9 July 2019 ku-15: 34
Umsebenzi onzima ka-idd wenziwa ngokukhiya emnyango wesikhangiso.
9 July 2019 ku-17: 56
14 July 2019 ku-16: 41
Ukuhlaziya okukhulu; ngiyabonga kakhulu. Ngingumuntu oye waqaphela usuku olulodwa ukuthi kuneZombies eziningi 'emdlalweni'. Ama-non-'zombies 'ambalwa angigcina lapha, kungenjalo ngabe ngabe ngibuye' futhi 'ngaphandle kokuqonda ngokugcwele ukuthi kwenzekani. Ungakwazi njalo ukukhathazeka ngokungapheli nokuthi kungani umuntu, isibonelo, engazi ukuthi isimo sezulu siyasetshenziswa futhi ungakwazi. Noma-ke, uma ucabanga ukuthi uvumile nekilasi ngesikhathi sokuphumula ukuthi uthisha kufanele ahlangane nakho, leli qembu lonke lizohluleka uma uthatha lokho njengeqhawe. Impendulo nguyena oyinhloko ine-backup, ishokutsi yikuphi 'original', i-zombie ayikho. Isikhombo sakhe yilokho akufundile, kuthathwe, wamukelwa, wagwinya, noma yini. Akanayo. Njengomfundisi wokucula, ngeminyaka engu-30 yokufundisa, ngiyazi ukuthi kukhona abambalwa abakwazi ukuxhumana nemisindo ehlanzekile, yama-harmonic. Iningi alikwazi ukwenza lokho; kungenza 'ukulingisa' kuphela futhi okungalokothi kusebenze kahle ngokucula (ngaphandle kokuphelela kwezobuchwepheshe njenge-PA nemakrofoni). Abaculi abaphezulu be-virtuoso ngokwabo baba umshini wokukopisha oncomekayo, abakwazi ukuzwa nokudala ngaleso sikhathi; kodwa kuhle kuphela ukuzala. Umbala omncane wokuhlukanisa, kodwa ngokucacile. Ukuphikiswa ukucwaninga ngemvelo yakho yangempela, isiqalo sakho sihlale sibonisa 'isimo sezombie'. Futhi ngempela, angikaze ngakwazi ukuguqula umculi kusuka zombie kuya original. Ungalokothi, njalo. Abaningi babo bacabanga ukuthi kukhona nami; ngoba mina kuphela ngibhekisela ekubuyiseleni ngenhloso yokuqala yama-frequencies kanye nokuvumelana. Ngaphandle kwezifundo zami zeqembu; lokho okuhlala kusithakazelisayo kumkopishi. Ungahlala ushaya phezu 'kokuphumula'. Kwenza ukuhlupheka okuningi ukuqonda lezi zihlaziyi ozichazayo lapha, yingakho kuwufanele isisindo sayo ngegolide. Kodwa futhi ikukhuthaza ukuthi uhlale njengento yokuqala ngokucindezela futhi ungahlanganyeli nanoma yiliphi igciwane; futhi, isibonelo, angeke agonywe. Ngomnyaka wami we-57 angikaze ngizibandakanye nayo futhi ngingasho ukuthi nginakekelwa kakhulu kusukela 'kokuqala'. Umgomo wami kuphela ngalesi sikhathi, ngaphambi kokuba ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngisuke kuzo, bekufanele ngikuqonde konke bese ngithi kuhle kula mdlalo ngokuthula. Bantfwana bami, abanobahlobo olufanayo lwegazi njengami, futhi lohlobo lwamazi luyaqhubeka ukukhiqiza 'iziqalo', ngakho lo ngumbuzo wami olandelayo, ngifunda ukudlala umdlalo kahle, ukujabulela (njengomdansa, isibonelo) hhayi bahlushwa yizo Zombies ngemizwelo yabo emibi futhi bazama ukukuphoqa ukuba ube yizikweletu. Futhi isebenza kahle kakhulu. Ukubingelela!
14 July 2019 ku-18: 25
Futhi njengalezifundo zakho zokucula, lesi sihloko sifinyelela kuphela esingenangqondo, ngoba kwabanye kungumlando othakazelisayo ongajabulisi lutho. Yingakho uthola igolide.
Ama-art academy kanye nama-conservatories omculo yizindawo ezinhle kakhulu zokuletha izithombe zekhwalithi eziphezulu futhi zihlanganisa nabantu abathandekayo phakathi kwe-photocopiers. Siyabonga ngokuhlanganyela okuhlangenwe nakho kwakho okusebenzayo emkhakheni wezifundo zokucula.
Zonke izimpendulo zivela ebuxhumeni bakho obungenawaya nge-original yakho. Yingakho enkulumweni ethi 'Ukudideka kwenkulumo yaseBabiloni' Ngisho ukuthi kufanele sithule futhi silalele ukuthi usuphi futhi.
« Ingabe u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU ozayo) empeleni wegazi elifanayo njengomndeni wasebukhosini waseBrithani?
I-Deutsche Bank-ukukhishwa kwesibhamu sokuqala kwezomnotho kuqala? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 333.034
Igciwane le-corona nokuqala kwenkinga enkulu elandelwa ukuthathwa kweYurophu yaseYurophu
Isikhathi sokuhamba ngaphambi kwamashalofu angenalutho
UMartin Vrijland op Igciwane le-corona nokuqala kwenkinga enkulu elandelwa ukuthathwa kweYurophu yaseYurophu
Namanje_A_Internet op Igciwane le-corona nokuqala kwenkinga enkulu elandelwa ukuthathwa kweYurophu yaseYurophu
SalmonInClick op Amabhomu aseRussia abhubhisa izimoto zaseTurkey ezihlome ngezikhali eSyria, isimo salola kakhulu
Hlaziya op Yini esivivinyweni esithatha amasonto angama-22 futhi kungenzeka yini ukuthi kushintshe ubulili bengane?